Cameron.....: အဖြူရောင်တိမ်တိုက်ပါးပါးလေးထဲက မှင် Tattoo
မင်းဟာ…ဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရနိုင်တဲ့ ကိုယ့်အတွက် မှင်တက်တူးတစ်ခုလိုပါပဲ….။ အချိန်တွေသာ တိုက်စားလို့ တဖြေးဖြေးအငွေ့ပျံကုန်ပေမယ့်…ခုထက်ထိ မရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ကတော့ မင်းကို စွဲလန်းရူးသွပ်နေတုန်းပဲဆို မင်းအပါအ၀င် ဘယ်သူမှမယုံကြဘူးထင်ရဲ့….။
တယ်လီဖုန်းထဲကနေ ဂွတ်နိုက်တို့ ဖရိုင်းကစ်တို့ နှုတ်ဆက်ဖူးခဲ့တဲ့ ညတွေဟာ….ချောင်ထိုးခံထားရတဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်ဟောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလားကွယ်……။
ကိုယ့်ကိုပြောနေကြပြီ နေ့အိပ်မက်ကနေ နိုးထပါတော့တဲ့….။ မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်နိုးတစ်ဝက်အိပ်တစ်ဝက်နဲ့ အိပ်မက်မက်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိသိလျက်နဲ့လည်း …….။ ဟင်းးး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့သူဟာ အနှိုးရခက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မယ်…။
ယောကျာ်းတစ်ယောက်… အထူးသဖြင့် ကိုယ်နှစ်သက်မြတ်နိုးစွဲလန်းလွန်းခဲ့တဲ့ မင်းဆိုတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ အလိုလိုနေရင်းနဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုပြုစားပိုင်စွမ်းတယ်တဲ့လား…ကိုယ့်နားမှာမရှိဘဲ ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ ဟိုးးး အဝေးတစ်နေရာကနေလေ(နီးနီးလေးပေမယ့်)။
ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက် တကယ် မုန်းစရာ နာကျည်းစရာကောင်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့လား….။ မယုံချင်ဘူးကွယ်….။ မင်းနှုတ်က မင်းကိုယ်တိုင်မ၀န်ခံပေမယ့် အခြေအနေအချိန်ခါက သူ့ဟာသူ ၀န်ခံသွားပြီ…။ ကိုယ်ဆိုတာ မင်းနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်…။ ခုမှမဟုတ်ဘူး ဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ မပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လို့များ မင်းမှတ်လိုက်ပြီလား….။
မင်းအတွက်တော့ ဟုတ်မှာပေါ့လေ….။ မင်းနဲ့ကိုယ်တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံချိန်တိုတိုလေးဟာ မင်းအတွက်တော့ အပျင်းပြေ သီချင်းတစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်သလို ဂိမ်းတစ်ခုကစားလိုက်ရသလို တခါတလေ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်လိုက်ရသလောက်ပဲရှိမှာပါ…..။
ကိုယ့်အတွက်တော့ မင်းဟာ…linkin park ရဲ့ဝုန်းဒိုင်းကျဲ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ heavy rock သီချင်းတစ်ပုဒ်လို……. ခတ်ရွတ်ရွတ်နဲ့နှုတ်ကတတွတ်တွတ်ဆိုတဲ့ နီကီမီနာ့ဂ်ျရဲ့ Hip Hop ဂီတလို ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ဘီယွန်းစေးရဲ့ R&Bတေးသွားလေးလို….. စီးမျောနစ်ဝင်သွားလောက်အောင် စိတ်ညွှတ်နူးဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ Letters to Juliet ရိုမန့်စ်အချစ်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလို…. ဘယ်တော့မှသောက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ ခါးဆိမ့်နေတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်လို….စွဲလန်းနှစ်သက်စရာကောင်းလှပါတယ်…။
ကိုယ်မင်းကို သံယောဇဉ်ကြီးသလို…. သူတို့တွေလည်း ကိုယ့်မင်းအကြောင်းလာဖတ်ရင်း မင်းကိုမမြင်ဖူးဘဲနဲ့ မင်းကိုခင်တွယ်ရစ်နှောင်နေတတ်ကြပြီလေ….။ ဟုတ်တယ်… ကိုယ်တစ်ခုခုပြောလိုက်မိတာတို့ တစ်ခုခုလုပ်မှာတို့ဆို မင်းအတွက်လားလို့ပဲမေးမေးနေတတ်ကြတော့တယ်….။ တကယ်တမ်း မင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုတာ ကိုယ်ရေးတဲ့ အက်ဆေးလေးတွေထဲမှာ အိန်ဂျယ်စာစုတွေထဲမှာပဲ ရှင်သန်သက်ဝင်နေကြတာပါ………။ တကယ့် အပြင်လက်တွေ့မှာတော့ အသက်မရှိတော့တဲ့ ပြာမှုန်တွေအဖြစ်ကိုရောက်နေသူတွေလောက်တောင် အဓိပ္ပါယ်မရှိလှပါဘူး…..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားနဲ့ မင်းကိုဘယ်ချိန်ထိ ကိုယ်အသက်သွင်းပုံဖော်နေဦးမလဲဆိုတာကိုလည်း သူတို့က စိတ်ဝင်စားနေကြဦးမှာပါ…..။
တကယ်တော့ လက်တွေ့မဆန်လှတဲ့ ကိုယ်ဘ၀မှာ မင်းဟာ ကိုယ့်ကောင်းကင်ကိုခုချိန်ထိတိုင် အုပ်မိုးပေးနေသေးတဲ့ တိမ်တိုက်ပါးပါးလေးတစ်ခုပါ….ဟုတ်တယ် ဘယ်တော့မှလွင့်ပြယ်ပျောက်ဆုံး မသွားမယ့် တိမ်လွှာဖြူဖြူလေးတွေလေ….။
Happy Belated Birthday Angel....:)
Posted by coral nyo at 02:41
လှပ ရှင်းသန့်တဲ့ အက်ဆေးလေးက ဖတ်ပြီးချိန်ထိ ရင်ကိုဆွဲဆောင်ခေါ်ယူနေတုန်းပဲ...